Ogaden News Agency (ONA) – Xeer-Ilaaliyihii Guud ee Maraykanka oo Xilkii Iska Casilay.
Xeer-Ilaaliyihii Guud ee Maraykanka oo Xilkii Iska Casilay.
Posted by Dayr	/ November 9, 2018
Xeer illaaliyaha guud ee dalka Maraykanka Jeff Sessions ayaa shalay xilka iska casilay kadib markii uu sidaa uu ka codsaday Madaxweynihii horey usoo magacaabay ee Donald Trump.
Mr. Trump ayaa bilihii lasoo dhaafay marar badan cambaareeyey xeer illaaliyihiisa oo uu sheegay inuusan qaban hawshii loo igmaday. Jeff Sessions oo ahaa Senator ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa ahaa Xildhibaankii ugu horeeyey oo taageeray Trump xiligii uu ku jiray ololihiisa doorashada, wuxuuna Trump markuu xilka qabtay u magacaabay Xeer illaaliyaha guud si uu uga hortago baaritaanka lagu wado xidhiidhka ka dhaxeeya Donald Trump iyo Ruushka.
Balse Sessions ayaa sheegay inuusan faro-gashan doonin baaritaanka horey u socday ee la xidhiidha Trump iyo Ruushka, arrintaasi oo uu si weyn uga cadhooday Donald Trump.
Casilaada Sessions ayuu Trump kusoo beegay wax ka yar 24saac kadib markii ay dhacday doorashadii Golayaasha Baarlamaanka Maraykanka oo ay xisbiga Dimuquraadiga guul ka gaareen Aqalka Hoose ama Golaha Wakiilada oo ay Aqlabiyada la wareegeen, golahaasi oo awood ulleh in uu sii xoojiyo baaritaanadii horey ugu socday Trump.
Trump halkaas kuma ekaan wuxuu isla markiiba magacaabay Xeer Illaaliyaha guud oo KMG ah, isagoo dhinac maray Kuxigeenkii Jeff Sessions ee mas’uulka ka ahaa baaritaanada socda Rod Rosenstein oo sharciyan ahayd inuu xilka sii hayo.
Wuxuu Trump u magacaabay Xeer illaaliyaha KMG ah Matthew G Whitaker oo xoghayn u ahaa Sessions ninkaasi oo xubin ka ahaan jiray Xisbiga Jamhuuriga ayaa kamid ah taageerayaasha Trump ee sida weyn uga soo horjeeday baaritaanka lagu wado Madaxweynaha.